तपाईंको स्मरण शक्ति कमजोर भएको यी ९ गल्तीले हो कि ? | सुदुरपश्चिम खबर
तपाईंको स्मरण शक्ति कमजोर भएको यी ९ गल्तीले हो कि ?
जसको कारण धेरै मानिस छिट्टै विर्सने, देखेको भेटेको वा पढेको कुरा सम्झन नसक्ने लगायतका समस्याबाट गुज्रिन गरेका छन् । युवा अवस्थामा नै मानिसको स्मरणशक्ति कमजोर पार्ने केही गलत बानिहरु यस्ता छन्ः
कतिपय मानिस कार्य व्यस्तताका कारण खाना समयमा नखाने, बजारमा पाइएको जे पनि खाने गर्दछन् । यसले शरीरसंगै मष्तिकलाई समेत कमजोर बनाउने गर्दछ । बिहान अबेरसम्म खाली पेट बस्दा मानिसको मष्तिकले काम गर्न सक्दैन र एकाएक अत्याधिक खाँदा मष्तिकमा उ’ल्झन उत्पन्न हुन्छ । जसले गर्दा मानिसको स्मरणशक्तिमा कमी आउँछ ।
६. अत्यधिक त’नाव
भनिरहनु पर्दैन मानिसको शरीरका लागी त’नाव श’त्रु झै हो । यसैले मानिसलाई कुनै रचनात्मक काम गर्नबाट बन्देज गर्दछ । सधैँ तनाव लिइरहने मानिसको दिमागमा यसले नराम्रो असर पार्दछ । र जब मानिस तनावमा हुन्छ यसले मानिसको स्मरणशक्तिमा कमी ल्याउने गर्दछ ।
धेरै भिडभाड, होहल्ला वा दिनभर थकान महशुस हुने काममा ब्यस्त हुने मानिस केहीबेर एकान्त बस्न खोज्नु स्वभाविक हो । तर यदि कोहि मानिस दिनहुँजसो एकान्त बस्न खोज्छ भने यसले पनि मानिसको स्मरणशक्तिमा कमी ल्याउने गर्दछ । समाचार वाटिका